शुक्रबार कतिले घट्यो सुनको भाऊ ? - Everest Dainik - News from Nepal
शुक्रबार कतिले घट्यो सुनको भाऊ ?
काठमाडौं, चैत ८ । साताको अन्तिम दिन अर्थात शुक्रबार सुनचाँदीको कारोबारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बिहिबारको तुलनामा सुनप्रति तोला २ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
छापावाला सुनप्रति तोला ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । साथै चाँदी प्रति तोला ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ बजारमा सुनचाँदीको मूल्य अवस्था !
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले छापावाला सुनप्रति १० ग्राम बराबर ५१ ह्जार ४४० रुपैयाँ, तेजावी सुन ५१ ह्जार १८५ रुपैयाँ र चाँदीमा ६ सय ३४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य कायम गरेको छ ।